Wasiirka Warfaafinta oo ka Hadlay saddex nin oo u soo dhacay xarunta Radio Hargeysa | Somaliland.Org
Wasiirka Warfaafinta oo ka Hadlay saddex nin oo u soo dhacay xarunta Radio Hargeysa
September 27, 2012	‘Sadexdan nin oo aan la aqoonsan waxa baadhistooda gacanta ku haya Ciidanka CID-da…’
Idaacadii cusubayd oo Tijaabo baxday iyo dalalka laga Dhegaystayg>
Hargeysa (DAWAN)- Wasiirka Wasaaradda warfaafinta iyo wacyi-gelinta Somaliland Md. Abiib Diiriye Nuur, ayaa ka hadlay markii u horeysay ka hadlay sadex nin oo dhalinyaro ah oo aan illaa imika la aqoonsan oo habeen sadexaadkii ka soo dhacay dayrka dhinaca waqooyi ee xarunta wasaaradda warfaafinta. Wasiirka Warfaafinta Md. Abiib Diiriye Nuur oo khadka Telefoonka noogu waramayay ayaa sheegay in sadexdan nin ee la qabtay ay baadhistooda gacanta ku hayaan ciidamadda baadhista dambiyada ee CID-da, waxaanu yidhi “Sadexdan nin oo aan la aqoonsan waxa baadhistooda gacanta ku haya ciidammadda Ammaanka. Waxaan rajaynayaa inaan haddii ALLE yidhaahdo aanu ka war doono halka baadhistoodu marayso iyo waxay noqdeenba.”
Wasiirku waxa uu ammaan balaadhan u soo jeediyay ciidanka ilaalada wasaarada warfaafinta oo uu tilmaamay inay mar walba heegan u yihiin adkaynta nabad-gelyadda xarunta wasaarada oo ah xarun adeeg muhiim ah u haya qaranka Somaliland.
Md. Abiib Diiriye waxa kale oo uu intaasi ku daray in dhawaan si rasmi ah xadhiga looga jari doono war laliska cusub ee Idaacada Radio Hargeysa. Sidoo kale, Agaasimaha Guud ee wasaarada warfaafinta iyo wacyi-gelinta Md. C/Rashiid Jibriil Yuusuf, oo shalay xafiiskiisa ugu waramayay shabakada wararka ee Somaliland.Org , ayaa ka hadlay idaacada cusub ee Radio Hargeysa oo uu sheegay inay ka baxday mudadii tijaabada ahayd oo lagu guulaystay. “Idaacadii cusbayd way ka baxdey tijaabadii, runtiina gobolada Somaliland oo dhan waa laga dhageystay, Soomaaliya oo dhan si wanaagsan ayaa looga dhageystey. Meelaha kale ee laga dhageystey ee qaarada afrika ka baxsan waxaa ka mida Mareykanka oo lagu dhageystey fooniyaha iyo Canada, meelaha aanu warbixinta ka hayno waxa ka mida Ingiriiska, New Zealand iyo Hindiya wadamadaas si wanaagsan ayaa looga dhageystay waxaanu lagu dhageystey qalabka foonyaha. Bariga dhaxe Afrika intooda badan waxa lagu dhageystay radio-ga,” ayuu yidhi Agaasimaha Guud.
Agaasimaha Guud oo hadalkiisa sii watay wuxuu intaasi ku daray “Imika waxaanu wadnaa diyaar-garowgii xafladii lagu furi lahaa oo aanu ku tallo jirno inaan xaflad weyn oo qaran u sameyno, madaxweynaha ayaanu rajaynaynaa inuu xadhiga ka jaro.” Idaacadda cusub ee Radio Hargeysa oo ah 100kwt, waxay ka mid ahayd balan qaadyadii Madaxweynaha Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) ummadda u balan qaaday xiligii lagu jiray olalihii doorashadda Madaxtooyadda ee dalka ka qabsoontay 26-kii Bishii June 2010-kii.
Dhinaca kale, Wasiirka warfaafinta Md. Abiib Diiriye Nuur oo ay weheliyeen Agaasimaha Guud ee wasaaradaasi C/Rashiid Jibriil Yuusuf iyo Maayar Ku xigeenka Hargeysa Maxamed Cabdilaahi Uur-cadde, ayaa shalay si wada jir ah uga qeyb galay olale nadaafadeed oo laga fuliyay waqooyiga xarunta wasaarada warfaafinta. Ololahan oo ay fulintiisa iska kaashadeen wasaaradda warfaafinta iyo Dawlada Hoose Hargeysa, waxa lagu nadiifiyay dayrka dhexdiisa. Waxaanay masuuliyiintu u soo jeediyeen dadka ku ganacsada dayrka wasaarada inay ka guuraan.
Previous PostHaweenka Kuuliga ah oo ku soo badanaya magaalada BoorameNext PostMadaxweynaha Somaliland oo wakaaladaha Laydhka dalka hoos geeyay Hawlaha Guud	Blog